Qoys 17 qof ahaa oo ku dhintay Qaza - BBC Somali
Qoys 17 qof ahaa oo ku dhintay Qaza
Image caption Qiiqa ka soo baxaya guryo ay diyaaradaha Israel ku dhufteen gantaallo
Xubno ku sugan Marinka Qaza ee dhulka Falastiiniyiinta ayaa sheegaya in 17 qof oo hal qoys ah inay dileen diyaaradaha Israel kaddib markii gantaal uu ku dhacay guri ay deganaayeen oo uu leeyahay madaxa booliska Qaza.
Tayser Al-Batsh ayaa lagu soo warramaayaa inuu six un u dhaawacmay.
Duqeymo kale ayaa la sheegayaa inay baabi’iyeen xarunta amniga iyo xuro kale oo ay lahaayeen ciidamada amniga ee magaalada Qaza, taas oo qeyb ka ah duqeynta ay Israel ku hayso dadka Falastiiniyiinta ee degan Qaza.
Xilli Sii horeysay, gantaalada ah noocyada meelaha fog-fog gaara ayey Xamaas ku garaaceen magaalooyiin ay ka mid tahay Tel Aviv.
Ku dhowaad 160 qof oo Falastiiniyiin ah ayaa ku dhintay isbuuc qalalaasa ah. lama soo sheegin dhimasho dhanka Israel ah.
Dhanka kale, hay’adda u qaabilsan Qaramada Midoobey arrimaha gargaarka iyo howlaha Falastiiniyiinta ayaa sheegay in 28 qof oo ka mid ah dadka guud ee duqeynta ku dhintay ay yihiin caruur.
Lataliyaha dhanka warbaahinta ee hay’adda UNWRA, Cadnan Abu Xasna, ayaa dalbaday in la joojiyo dhiigga iska daadanayo.
Wuxuu intaa ku daray, Qaza oo ah meel aad u dad badan in micneaheedu uu yahay inay dad badan ku dhimanayaan ama ay ku dhaawac maayaan haddii lagu duqeeyo hub aad u culus, Ayna tahay wax aan la saadaalin karin heerka ay dhimashada gaari karto..